Isitolo esidayisa yonke impahla i-chakra yokuhlobisa enamakha amakhandlela esoya anama-crystals efektri yesitoko nabakhiqizi | UWinby
Ikhandlela Lokukhiqiza Lobungcweti Iminyaka engama-20
amber ingilazi jar jar inkambiso iphunga amakhandlela
i-matte wax yemvelo inephunga elimnandi lamakhandlela aluhlaza okwesibhakabhaka
ikhandlela lesici seglasi le-matte
Ikhandlela le-Natural Bee wax lokuhlobisa
intambo ephothiwe yekhandlela likakotini le-DIY
Amakhandlela Wick Trimmer / Wick Dipper / Wick Snuffer
Izinkampani Zokukhiqiza Zekhandlela Lesonto - Okungokwemvelo ...
Natural Bee wax C ...
Ceramics C ...
I-chakra yokuhlobisa enamakha amakhandlela e-soy anama-crystals esitokisini
Ikhandlela le-Soy Crystal ekhwalithi ephezulu iqukethe amagremu angama-200 we-100% wekhwalithi ephezulu yesoya yemvelo, itshe le-crystal chakra, amafutha acwengekile abalulekile, iqabunga le-sage, intambo yekhandlela likakotini elingu-100%, evutha kuze kufike emahoreni angama-40. Inganikeza indawo ephumuzayo nenethezekile.
Amakhandlela e-Crystal ahlinzeka ngokuhlanzeka okukhulu nokukhululeka kwengcindezi, kukugcina uzolile.
Sinezimbiza zamakhandlela engilazi esitokweni, uma udinga leli khandlela, singalithumela ngokushesha okukhulu, ukuze ukwazi ukuthola izimpahla zakho ngesikhathi esincane.
Usayizi: D8.6cm * H10.3cm
Amakhabethe we-Crystal marble Soy Wax Aromatherapy Amakha anesiqukathi esiyingqayizivele sengilazi esobala
Hhayi kuphela ukuthi ilungele ukuhlanza indlu yakho nokuhlinzeka umoya opholile, kepha nezipho zomshado, amaphathi, amadina nesipho sikaKhisimusi, imihlobiso kaKhisimusi. Futhi ilungele i-yoga ne-aromatherapy.
Qaphela: Ungalokothi ushiye ikhandlela elivuthayo lingenamuntu. Yigcine ingafinyeleleki ezinganeni nasezifuyweni. Ungashisi amakhandlela kunoma yini noma eduze kwento engasha. Ingabekwa kuphela endaweni emelana nokushisa, emelana nomlilo. Gwema ukusebenzisa izindawo ezibandayo ezifana nengilazi noma imabula.
Iphunga nokupakisha konke kungenziwa ngezifiso !!!
Insizakalo yesampula ingahlinzekwa.
I-Soy Wax + Imbiza yekhandlela eliqhekekile + Intambo kakotini + isivalo soqalo
I-D8.6cm * H10.3cm
Ngokwezifiso njengezidingo zamakhasimende
Kusuka ku-CPL & Symrise. 2%, 3%, 5%, 10% kungakhethwa
Umhlobiso wasekhaya, i-yoga, imikhosi, ihhotela, umshado, iphathi, i-spa nokubhucungwa umzimba.
Ukulethwa okusheshayo / ngokwezifiso / i-ODM OEM / isampula
3000pcs. Ama-oda amancane angamukelwa uma sinesitoko.
Okokuqala, sine isitifiketi ngaphansi kwezinga le-Euro. Amakhandlela ethu afinyelele ezingeni le-European, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yamakhandlela ethu. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezifundeni, njenge-United States, iRussia, iYurophu, iSouth-mpumalanga, njll. Futhi zamukelwa kahle ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Okwesibili mayelana nezinto zokusetshenziswa, sisebenzisa i-parafini wax, i-soy wax, i-wax yezinyosi nenye i-wax yezitshalo njengezinto ezingavuthiwe zamakhandlela. I-Soy wax ingalayisha u-10% kawoyela obalulekile futhi inikele ngokujikijela okuhle kakhulu kwephunga. Futhi i-wax wax ayinazo izithasiselo zamakhemikhali noma udayi.
Okwesithathu kwephunga, sisebenzisa izinhlobo ezingaphezu kwezingu-100 zamakha akhethiwe amakhandlela. Abahlinzeki bethu bamakha ngamakha we-CPL neFirmenich. Zonke ziphezulu imikhiqizo yabathengisi bamakha emhlabeni. La maphunga atholakala kusetshenziswa amakha kanye namafutha abalulekile, futhi kuzokusiza ukuthi udale umoya oduduzayo. Okwamakha, singakunikeza amaphunga ahlukene ngendlela othanda ngayo. Uma uthanda iphunga elinamandla, ungakhetha u-10% wamafutha kukhandlela; uma uthanda iphunga elithambile, ungakhetha u-5% kawoyela kukhandlela.
Ngokwengeziwe, sinawo umklamo wethu siqu futhi ukuthuthukisa umnyango, futhi singahlinzeka ODM futhi OEM inkonzo kumakhasimende. Sinikeza insizakalo ephelele kusuka kumqondo wokuqala kuya kwimikhiqizo yokugcina evunyelwe. Abaqambi bethu abangochwepheshe bazokusiza ukuthi ufeze inhloso yakho.
Langaphambilini Amakhandlela Esipho Esinephunga Elimnandi nge-wax yemvelo yesoya
Olandelayo: Ukuhlobisa Kwasekhaya Amakha we-soy Wax Cube Melts tarts
Iphunga Lamakhandlela Elinamakha
Amakhandlela Anephunga Eliseduze Nami
Amakhandlela anamakha Online
I-Organic hemp wicks ifakwe ku-bex
Ilogo yangasese ikhandlela elihlobisa ngokwezifiso
isigubhu samakhandlela engilazi emnyama
Upharafini wax aromatherapy amakhandlela amancane
Ikhandlela lobumba lekhandlela lobuciko
Iphephandaba Hlala ubukele izibuyekezo